Somali Midabka aluminium ee tayada leh ee aluminiumka ah wuxuu ku daboolayaa xaashida saqafka dusha sare ee muraayadda qiimaha mishiinka
waraaqaha dusha sare ee biraha ah ee la isku qurxiyo ayaa leh muuqaal qurux badan iyo midab dhalaalaya. Waxaa si weyn loo isticmaalaa beerta, warshad, hudheelka, hudheelka, hoolka bandhigga, fasaxyada, dhismayaasha qadiimiga ah iyo villa casri ah.
qalabka casriga ah ee la isku qurxiyo ee makiinadaha dhaadheer oo iibiya mishiinka iibiya badiyaa waxay iibiyaan dalal badan. Waxay jecel yahiin xaashida dusha sare leh ee dusha sare leh ee loogu talagalay sariirta guriga.
Xaashida dufan ee casriga ah ee la isku qurxiyey ka hor inta aan duubneyn gariirku waa 1250mm, isticmaalka maaddada birta la galiyey ee birta la galiyey ee PPGI.
Boorsada dhamaystiran ee qaababka dusha sare leh ee la isku qurxiyo ee la isku qurxiyo waxaa ka mid ah jimicsi, mashiinka wax lagu sameeyo, nidaamka xakamaynta kumbuyuutarka iyo miiska saaran.
Waxaa la soo dhaweynayaa, haddii aanad helin waxyaabaha aad u baahan tahay ee boggayaga internetka, fadlan i tusi baahiyahaaga sawirada, halkan waxaan ku dhiseynaa naqshadeyn doonaa oo waxaan ku siin doonaa hal jawaab ah oo qancin ah.